အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးကဝေမဖြစ်လာနိုင်ပါသလား? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါသူလုပ်နိုင်ထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနည်းအလိုဆန္ဒအဘို့, သင်သည်သူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုထုတ်ဖော်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကသူတို့ကိုပြန်ပြောပြဖို့နိုင်တော့မည်သည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများသတိပြုမိစေရန်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျ (; poveztquot မဟုတ်; Quote လျှင်အများစုကပေမယ့်) ကံကောင်း get လျှင်, သင်ကအခြားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်လိုင်းကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ထိုသို့ဆိုစွမ်းရည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါလည်း။ စုန်း / wizards (မ nezhitebortsy) စုန်းမတူဘဲနှင့်မာဂုပညာရှိလမ်းကြောင်းကိုသွန်သင် (မထိုးထွင်းသိမြင်အမြင်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) ကိုလိုက်နာ wizards ။ Magician ကြာကြာလေ့လာနေပေမယ့်သူ / သူမ၏စွမ်းရည်တစ်လောကလုံးဖြစ်ကြသည့်စိတ်ဓါတ်များ / ချဉ်ကြော်အခြေအနေများ / ကျန်းမာရေးအပေါ်လျော့နည်းမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ အစဉ်အလာကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းရာအနယ်ပယ်များတွင်သဘာဝနှင့်သဘာဝလွန်နှစ်ဦးစလုံးကိုလညျးတတျကြှမျးဝိဇ်ဇာဆရာတို့အဖြစ် Magessy ။ ဇီဝဗေဒ / monstrologiya / Demonology / golemostroenie ။ crystals dowsing နှင့်ရှာဖွေငုပ်လျှိုးနေနိုင်စွမ်း (မြေကြီးတပြင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာဥပမာသတ္တုရိုင်းသိုက်) နဲ့ပထဝီ / မြေပုံ / mineralogiya-> အဂ္ဂိရတ်ကြည်လင်အလင်းနှင့်အမှား။
ကမ်ဘာပျေါတှငျအရာရာအပြန်အလှန်ဖြစ်ပြီး, ရှိသမျှသောလောကီအစိတ်အပိုင်းများကိုသိရန်ခက်ဝိဇ်ဇာဆရာတို့ရင်ဆိုင်ရဘယ်သူကိုအတူ။ ဒါဟာပင်မှော်အခွက်တဆယ် (နှင့်မှော်၏အတော်လေးနည်းနည်း ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီး၌ကျန်ကြွင်း) နှင့်ဘာမျှမမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကန့်သတ်မရ, ကထက်ပိုမိုသိရန်အလိုဆန္ဒမပါပဲ။ အတိအကျသိပ္ပံ? ဂရိတ်! အဆိုပါမြင့်မြတ်သောအနုပညာ? Excellent က! သဘာဝအသိပညာ? ဂရိတ်! ဝိဇ်ဇာဆရာတို့အားလုံးတွက်ချက်မှုသို့ ယူ. သူတို့ Quote အဖြစ် ogranicheyny မထင်သော်လည်း, nenauchnostiquot; သို့မဟုတ်အဲဒီမှာ quote; nepopulyarnostiquot; နည်းလမ်း / ဖြစ်စဉ်ကို။
Magician အအေး chrezchur နဲ့တူနေတယ်။ မည်သူမဆိုတစ်ဦး Self-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ start နှင့်ထိုမှတပါး process နိုင်စွမ်း, စုန်း, ကဝေမ, wizard ကိုတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးအတွက်အလားတူအယူအဆရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျစွမ်းအင် vnktrennyuyu သုံးပါနှင့်ထုံးတမ်းကိုမသုံးပါလျှင်ငါစကားလုံးမကြိုက်ဘူးပေမယ့်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦး Magician) ကိုယ့်ကိုကိုယ်မခေါ်နိုင်ပါ။
ငါ clairvoyance နိုင်စွမ်းရှိသည်, ငါကုသမှုနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် Magician ကိုယ်ကိုမခေါင်းစဉ်ပါပြီ။ ငါ့အဘို့သကဲ့သို့, ဝိဇ်ဇာဆရာတို့ဒြပ်စင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်, သင်တို့နှင့်အတူ, သူတို့ကိုနဲ့အညီရရှိ။
မှော်သည်မဂ္ဂဇင်းထက် ပို၍ ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယောက်ျားမိန်းမများထက်မိန်းကလေးများနှင့်မိန်းမများသည်မှော်အတတ်ကို ပို၍ လိုချင်ကြသည်။ သူကဆွဲဆောင်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်။ မင်းမှာသတ္တိရှိပြီးဗဟုသုတရှိရင်မိန်းမတစ်ယောက်ဟာမှော်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မှော်အတတ်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အမြင့်ဆုံးသို့မရောက်ရှိနိုင်သည့်နေရာ - necromancy ဖြစ်သည်။ ဒီinရိယာ၌အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုတနည်းဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါဝိဇ္ဇာအတတ်အား၏ကျွန်။ မမြင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္။ ။ လ၏အနီးကပ်လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်အခြားသုံးမျက်နှာရှိနတ်ဘုရားမ Hecate သည်ပိုမိုနီးကပ်သည်